Kora Federaalizimii: ABO fi KFO’n kora Maqaleetti qophaa’erraa maaliif akka hafan himan – Kichuu
[ February 25, 2021 ] የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በመተከልና ትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ አደረጉ Amharic
[ February 25, 2021 ] Statement by the United States on the Human Rights Situation in Eritrea World
[ February 25, 2021 ] በስላማዊ መንገድ ተቋውሞ የሚያደርጉን ዜጎች የታጠቁ የመንግስት ኃይሎች የሚፈፅሙትን ድብድባ እና ግድያ ኦነግ ያወግዛል የኦሮሞ ነፃነት ግንባር መግለጫ 11/02/2021 ዓም Amharic
[ February 25, 2021 ] Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa qajeelfamni lakk. 7/2013 keyyanni 16(2) akka haqamu murteesse News
[ February 25, 2021 ] Grand Oromo Rally-Washington DC Videos
[ February 25, 2021 ] A preliminary understanding reached by Somalia PM and opposition members World
[ February 25, 2021 ] Ethiopian heritage under attack as reports of massacre emerge World
[ February 25, 2021 ] Abiy Ahmed: Biyyoonni Addunyaa Filannoo Sobaa Abiyyi gaggeessuuf qopha’aa jiru harkatti kuffisaniiru!! News
[ February 25, 2021 ] Tigray official slams damage by troops from ‘neighbouring’ country Africa
[ February 25, 2021 ] Hunger-striking Ethiopia politicians ‘deteriorating’ in jail Africa
HomeAfaan OromooNewsKora Federaalizimii: ABO fi KFO’n kora Maqaleetti qophaa’erraa maaliif akka hafan himan
Kora Federaalizimii: ABO fi KFO’n kora Maqaleetti qophaa’erraa maaliif akka hafan himan
Kora federaalizimii Maqaleetti ta’ame irratti paartileefi namoonni waamicha taasifames irratti hirmaataniiru
Addi Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) kora federaalizimii irratti xiyyeeffate Maqaleetti qopheesserratti paartileen federaalistii ta’an hedduu irratti hirmaatanis ABO fi KFO’n garuu irraa hafaniiru.
(bbcafaanoromoo)—Kora yeroo lammataaf qophaa’e kun mataduree ‘Heera mootummaafi Sirna Federaalawaa Sab-daneessaa Baraaruu’ kan jedhudha.
Haata’u malee, waggoota 27 darban hanga MM Abiy aangoo qabatanitti dhaabni ADWUI olaantummaan TPLF keessa ture sirna federaalizimii dimookiraatawaa hin taaneen bulchaa ture jedhamuun qeeqama.
Kanaaf, ar’a sirna federaalaatiif wabii ta’uuf yaaluun ykn birmachuu waamuun TPLF taajjabbii jalaa isa hin oolchine.
Dhaabbilee siyaasaa Oromoo jajjaboodha jedhamaniif sirna federaalaa bu’uura qabsoo isaanii godhachuun socho’an akka ABOfi KFOn maaliif akka kora kana irratti hin himaanne BBC Afaan Oromoo gaafateera.
Waamichi TPLF irraa taasifamus odeeffannoo ani qabuun namni dhaaba isaanii bakka bu’e kora Maqalee kanarratti hirmaataa jiru kan hin jirre dubbatan Obbo Addisuu Bullaallaa.
Sirna federaalaa dhaaba TPLF osoo hin taane qabsoo ummanni Oromoo gaggeessen waan fidedha kan jedhan Obbo Addisun, sirni federaalaa akka tuqamu hin barbaannu jedhan.
‘Dhaabota Oromoo hunda wajjin hojjechuu murteessine’
TPLF sirna federaalizimii seeraana hojiirra oolchaa hin turre, ittiin sabaafi sablammoota cunqursaa ture. Har’a sirna federaalizimiif nan quuqama jechun isaa waan itti abdatamu miti.
“Gaafa isatti hammaate sirna federaalaan hordofa jedhee, gaafa itti tole ammoo maqaa saniin saamaa ture waan ta’eef hamileen isaanii hagas mara nu hin ajaa’ibu.
‘Sagantaan keenya wal fakkaachuu danda’a garuu seenaan keenya wal hin fakkaatu. Nuti harki keenya qulqulluudha. Isaan kaleessa nu saamaniiru, ammallee marsaa biraa of haaromsanii samuu barbaadu. Kanaaf jecha michoomina isaan waliin uumuu hin barbaadnu.
“Daboo fakkeefachuun humna godhachuuf waan godhamu jechuun sirna federaalizimiif quuqamanii waan godhan miti jechuun ‘aangoorraa waan bu’aniifi,” jechuun qeeqan.
Dhuguma TPLF ADWUI keessaa bahuuf murteesseeraa?
Isaan waliin haasaa addaa hin qabnu kan jedhan Obbo Addisuun humni isaanirraa barbaannu tokko hin jiru. Humni ummata Oromoo gahaadha jechuun dubbatu.
Addi Bilisummaa Oromoollee sirni federaalaa dimookiraatawaa ta’e akka itti fufu kan barbaadu yoo ta’u, kora federaalistootaati jedhameefi Maqaleetti ta’amaa jiru irratti hirmaataa akka hin jrre beeksiseera.
Dubbii Himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa waamichi dhaaba isaaniifis ergamuullee ‘kan iratti hin hirmaanne ta’uu hubachifneerra,’ jedhan.
“Dhimma federaalizimii osoo hin taane nuti humna achitti walgahii kana waame waliin walgahii akkasii waliin gaggeessuu dura waan fixachuu qabnu waan jiruuf irraa hafne,” jedhan.
‘Sirni Federaalizimii maqaadhaaf malee qawween ummata bulchaa jira’
Kanas yoo ibsan, “humni achi jiru waggoota dheeraaf miidhaa olaanaa ummata Oromoorraan kan geessisaa ture, miseensota ABO kan dhabamsiiseefi dhaaba irrattis miidhaa olaanaa dhaqqabsiisesera,” dubbatu.
Kanaan alatti akka addatti haasaan dhaaba naannoo Tigraay bulchu, TPLF, waliin eegalan yoo jiraateef kan gaafanne Obbo Toleeraan ”Haasaa akkasii waliinuu hin qabnu. Hariiroo homaatuu dhaaba TPLF waliin hin qabnu,” jedhan.
Ofiifuu komii irraa qabna, gaaffii irraa qabna isa gaafa xumuranne gara kaanitti ce’uu kan dandeenyu jechuun ibsan.
Isa xumuranna jedhan akkamin raawwachuuf akka yaadan kan gaafanne Obbo Toleeraan ‘nuti rakkoo keenya ibsanneerra. Deebii achirraa dhufutu murteessa, jechuun ibsan.
Ethiopia: A two day conference assessing & evaluating challenges & opportunities of constitutionalism & Ethiopia’s multinational federalism is ongoing in Mekelle, https://t.co/h1E4qTHltl pic.twitter.com/JqxGdni2hS
— Kichuu (@kichuu24) December 4, 2019
Nuti……….Viidiyoo kana dhaggeeffadhaati waliif dabarsaa! Qeerroon nubira darbee jaarraa 22ffaa keessa jira jechuu dandeenya!!!
Barattoonni Oromoo Yunivarsiitiiwwan naannoo Habashootaati lubbuu isaanii baafatanii Oromiyaatti deebi’an yeroo ammaa kanatti magaalaawwan gurguddoo akka #Finfinnee, Naqamtee, Amboo, Adaamaa, Shashamanneefi Dirreedhawaa keessaatti walitti qabamanii nama isaan dubbisu dhabanii jiru. Yunivarsiitiichatti deebi’uuf warri hafanuu naannoo Habashootaati akka ba’an Habashoonni taasisaa jiru. Ijoollee kana keessaa gara maatiillee dhaquu dadhabanii kan karaarra qorra keessa qullaa bulan jiru. Waajjirooleen mootummaafi Yunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiran jalaa qabuu didaniiru. Isa xumuraaf ijoolleen kun fincila kaasanii sirna kanaan dhumanis dhumuu yerootti filatanirra gahamee jira. Oromoon waa’ee ilmaan keessan kanaa maal jettani?
Mark your calendar to attend this event on FINFINNEE AND THE OROMO LANGUAGE: PAST, PRESENT, AND FUTURE. Date: 7th of December, 2019.
November Inflation Rate Reaches 20.8pc
የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በመተከልና ትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ አደረጉ
Statement by the United States on the Human Rights Situation in Eritrea
በስላማዊ መንገድ ተቋውሞ የሚያደርጉን ዜጎች የታጠቁ የመንግስት ኃይሎች የሚፈፅሙትን ድብድባ እና ግድያ ኦነግ ያወግዛል የኦሮሞ ነፃነት ግንባር መግለጫ 11/02/2021 ዓም
Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa qajeelfamni lakk. 7/2013 keyyanni 16(2) akka haqamu murteesse
Grand Oromo Rally-Washington DC
A preliminary understanding reached by Somalia PM and opposition members
Ethiopian heritage under attack as reports of massacre emerge
Abiy Ahmed: Biyyoonni Addunyaa Filannoo Sobaa Abiyyi gaggeessuuf qopha’aa jiru harkatti kuffisaniiru!!
Tigray official slams damage by troops from ‘neighbouring’ country
Bekele Gerba’s brother, Yohannis Gerba has been arrested today.
Oduu Ammee! Filannoon garee PP fudhatama Dhabe!
ABO Biltsiginnaa ykn Hilton Oromoon hin beeku.